Zviratidzo Zviratidzo zvekuwedzera Webhusaiti Traffic Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 4, 2013 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
BWHGeek yagadzira iyi infographic munzira dzekuwedzera traffic kune yako saiti. Handina chokwadi chekuti ndinobvumirana neBWHGeek pamusoro pekuti ndiani anonyanya kugashira… tinoda Flywheel (uye vanobatana) uye ini ndinotenda yavo infographic ine mukaha muhombe mairi… nhare.
Mobile optimization yewebsite yako kuburikidza nekuteerera dhizaini, nhare mbozha uye / kana nharembozha inzira inoshamisa yekukura traffic. Yedu pachedu iPhone uye maapplication eApple ari kukura padanho rinokurumidza kupfuura yedu traffic yewebhu (zvakaenzana). Kuva ne nhare yakagadziriswa saiti uye kunyorera kwakanakisa kweinjini yekutsvaga uye yekutsvaga nharembozha zvakare. Tora nhare. Zvino.
Zvikasadaro, ini ndinoda rairo mune ino infographic - kunyanya kuendesa an email tsamba yekunyora zano uye kukwidziridzwa. Kubhadhara traffic kune yako saiti nevatengesi vanotyaira akakodzera vashanyi (isu tinoda Outbrain uye StumbleUpon Ads, futi) zvinogona kukubatsira iwe kukura vateereri vako uye chengeta vashanyi iwe wawakabhadhara pakutanga kusvika ikoko.
Aug 5, 2013 pa 10: 10 AM
Kutenda nemazano Douglas. Ini ndichangobva kuve blogging yevaeni uye ndinovimba zvinounza traffic. Kunyanya kuve wezvemagariro midhiya mukomana ini ndinogara ndichiedza kuudza vanhu kuti inoda kushandiswa uye kana ikashandiswa, yakagadziridzwa.
Aug 6, 2016 na11: 35 PM
Kutenda kune ako matipi ekuwedzera Webhusaiti Traffic, ini ndoda ruzivo urwu